SONATA-CANTATA: အူမတောင့်ခြင်းနှင့် သီလစောင့်ခြင်း
ကိုဧရာရဲ့ ရေးသားချက်က အင်မတန် ကောင်းပါတယ်။
ဒီစကားရပ်ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘာသာရေးတွင်မက ယဉ်ကျေးမှု၊ စီးပွါးရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးတွေပါ ပါနေတယ်ဆိုတာ ကိုဧရာရေးမှ ကျမ စဉ်းစားမိပါတော့တယ်။
စက္က၀တ္တိသုတ်ကိုလည်း အချိန်ရရင် ဖတ်ရှုလေ့လာချင်ပါသေးတယ်။
Thanks so much for this post. I totally agreed with the view of author.
ကိုဧရာ ထောက်ပြတာကို သဘောကျပါတယ်။
ဒီစကားပုံက စားဝတ်နေရေးကျပ်တည်းတဲ့အခါ ရပ်ရွာမှာ ခိုးဆိုးလုယက်မှုတွေ၊ မတရားမှု၊ မလိမ့်တစ်ပတ်မှုတွေ ပေါလာတတ်တာကို သတိပြုစေချင်လို့ ရေးခဲ့သုံးခဲ့ကြတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မပြည့်စုံတဲ့လူတွေကို တလွဲလျှောက်လုပ်အောင် အားပေးတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုး မဟုတ်ပေမယ့် စကားပုံလည်း အလွဲသုံးခံရတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အသုံးပြုတဲ့ သူအပေါ်မှာ မူတည်သွားတယ် ထင်ပါတယ် ..
မရွှန်းမီပြောသွားသလိုပေါ့ ..း)
ကောင်းလိုက်တာ . ။ ကိုဧရာလိုတွေးတတ်ချင်တယ်.. ။ စီးပွားရေးဟာ အရေးကြီးတဲ့ မှန်ပေမဲ့ ဘဝရဲ့ တစိတ်တဒေသပဲပါ ။အားလုံးမဟုတ်ပါဘူး ။ အဲ့ဒါကြောင့် ကိုဧရာပြောတဲ့ “လူတို့၏ အတွေးအခေါ်ဓလေ့စရိုက်များနှင့် လူ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ အောင်မြင်မှုကို စီးပွားရေးတစ်ခုတည်းကသာ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်မဟုတ်။“ဆိုသော ယူဆချက်ကို ထောက်ခံမိပါ၏ ။
ကိုဧရာ ရေးတဲ့ပို့စ်တွေက ပို့စ်တိုင်းမှာ ကျွန်မအတွက် မှတ်သားစရာ တခုခု အမြဲရပါတယ်။ မင်းကျင့်တရား ၁၀ ပါးအကြာင်းကို သိပေမဲ့ ဘုရားဟော တဲ့ စက္က၀တ္တိသုတ်မှာ ဒီလို ချို့တဲ့သူကို ကျွေးမွေးထောက်ပံ့ဖို့ ပါတယ် ဆိုတာ ကျွန်မ အခုမှပဲ သိရလို့ သိပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟုတ်တယ်။ အူမတောင့်မှ သီလစောင့်နိုင်မယ်ဆိုတာ ဆင်ခြေပေးစကားလို့ မငုံလဲ မြင်တယ်။ မှတ်သားသွားပါတယ်။